September 14, 2017 6:14 am Views: 164
Wararka ka imaanaya dalka Afghanistan waxey xaqiijinayaan in qeybo ka mid ah Bariga Afghanistan lagu soo riday mid ka mid ah riyaadaha duuliye la,aanta dowlada Nasaarada Mareykanka.
Ciidamada difaaca Cirka Imaarada Islaamiga Afghanistan ayaa dhulka soo dhigay mid ka mid ah diyaaradaha Basaaska duuliye la aanta dowlada Mareykanka taasi oo lagu soo riday duleedka degmada Shir-zad oo ka tirsan gobalka Nangahaar.
War rasmi ah oo kasoo baxay Imaarada Islaamiga Afghanistan laguna baahiyay Webseydka Imaarada ayaa lagu xaqiijiyay in ciidamada Mujaahidiinta gacanta ku dhigeen diyaarada markii dhulka ay kusoo dhacday.
Diyaaraddan lagu soo riday gobalka Nangahaar ayaa xilligii lasoo ridayay waxey la socotay diyaarado kale oo duqeyman xoogan ka waday degaano ka tirsan gobalka Nangahaar.
Diyaaradan laga soo riday Mareykanka ayaa kusoo aadeysa xilli Todobadkan gudahiis Labo camaliyadood Istish-haadiyo ah oo ka dhacay gobalka Barwaan ee Waqooyga Afghanistan ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen inka badan Konton askari oo American ah.